Iflethi ekwicomplex esemgangathweni embindini wentlambo! - I-Airbnb
Iflethi ekwicomplex esemgangathweni embindini wentlambo!
Le yiflethi ekwicomplex esembindini weCanaan Valley. Ngaphantsi kwemizuzu eyi-10 uhamba ngemoto ukuya kwinto yonke: i-Timberline ski resort, i-Canaan Valley ski resort, indawo yokutyibiliza emkhenkceni eyonwabisayo yasekuhlaleni ye-XC: I-Whitegrass, iigalari zobugcisa, iindlela zokutya ezimangalisayo, iindawo zokwenza ibhiya, kunye neendawo zokwenza utywala! Kukho iipaki ezimbini zikarhulumente zokunyuka intaba nokubuka iindawo ezikumgama wemizuzu eyi-10, kunye neendawo ezintle zezilwanyana zasendle ezikumgama weemayile eziyi- kuphela. Nokuba yeyiphi indawo yokuzonwabisa yangaphandle oyithandayo, iTucker Co ineendawo ezifanelekileyo zokubuka. Kwaye, i-WiFi ekhawulezayo :)
Le ndawo yiflethi okanye indlu ekwicomplex ethe cwaka enendawo yokungena eyahlukileyo kwindlu enkulu. Inekhitshi elipheleleyo kunye nefriji encinci, igumbi lokulala, kunye nendawo yokuhlala. Ukuba ufuna ukufumana umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla okanye into eyongezelelekileyo, sazise nje! Siphila kumgangatho ophezulu ixesha elizeleyo kwaye siyakuvuyela ukukunceda!
Siphakathi entlanjeni. Xa usendlini ungabona ii-resort zokutyibiliza kwikhephu, indawo yezilwanyana zasendle, ipaki karhulumente, ihlathi lesizwe kunye neendawo ezininzi zokuhamba ngeenyawo. Yindawo entle, ethe cwaka enabantu abahlala ixesha elizeleyo.